Holsteiner, karazana rà mandefitra | Soavaly Noti
El Soavaly Holsteiner dia avy any Schleswig-Holstein any avaratr'i Alemana. Ny niandohany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ka izany no iheverana azy ho iray amin'ireo karazan-tsoavaly soavaly lava antonony. Izy io dia karazany ankasitrahana indrindra ao amin'ny mampiseho fifaninanana mitsambikina sy akanjo noho ny toetrany sy ny fahaizany mihetsika.
Hatramin'ny faramparan'ny taonjato faha-XNUMX, ny karazany dia novolavolaina teo ambany fanaraha-mason'ny fikambanana iray izay manampy ny mpiompy hifanaraka amin'ny filan'ny tsena. Taloha dia a soavaly hitch tena tsara ary amin'izao fotoana izao noho ny hazofijaliana miaraka amina zana-tohatra vokatr'izany dia soavaly fifaninanana kanto.
Mbola azo lazaina ihany fa noho ny fitondra-tenany sy ny rivotra be nataony ny Holsteiner dia soavaly mety indrindra indrindra ho an'ny akanjo. Mpitsambikina goavambe izy ireo ary ny fironan'ny lamosina dia mamela azy ireo hihetsika amin'ny alàlan'ny diany mitaingina soavaly tsara. Ny canter, izay tsy maintsy maivana, malama, mandanjalanja ary mavitrika.
Ny Holsteiner dia manana vatana matanjaka, satria manambatra tanteraka ny tanjaka sy ny hakantony. Manify sy mahay mandanjalanja izy io. Manitatra ny vatany ary hozatra be ny rantsambatana. Soavaly tena lava izy io, eo anelanelan'ny 160 sy 173 santimetatra ny haavony.. Ny malazo dia voamarika be, ary ny vona lava dia mitosaka. Miaraka amin'ny loha mahitsizoro dia lava sy kanto izy io, ary ao no ahitantsika maso lehibe sy maneho hevitra lehibe. Ireo dia manondro ny fahaizan'ity biby ity. Ny sosona matetika matetika dia maizina: mainty, chestnut ary volontany mainty ary vitsy ny marika. Na dia tratra tratra sy thrushes aza dia matetika no hita.
Aza sakanana ity karazan-dra malemy fanahy ity. Tamin'ny lasa, soavaly mavesatra izy ireo satria manan-kery sy rakotra tany maro. Taloha dia tsy miraharaha izy ireo ary miadana be. Taorian'ny fanatsarana ny karazany tamin'ny taona 50 sy 60 dia nesorin'izy ireo ireo lesoka ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Holsteiner, hazakazaka ra antonony